ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ ၁ ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ Androidsis
စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ 1 နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်
ဒီနေ့ပြန်လည်သုံးသပ်သည် True ကြိုးမဲ့နားကြပ်မှတဖန်။ တဖန်ငါတို့သည်ငါတို့ကထုတ်လုပ် device ကိုရှိသည် စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ ၁။ ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ဖို့ကံကောင်းတာကဒီကုမ္ပဏီမှပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ ပြီးတော့သူတို့အားလုံးကသူတို့ပေးတဲ့အခြေခံအဖြစ်သာမကအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုပါသဘောတူကြတယ် လူသိများတဲ့အရည်အသွေးနိမ့်ဆုံး.
Urban 1 နားကြပ်ကပြောလို့ရတယ် အမုန်းတရားကြိုးတွေမှတစ်ချိန်ကလူအပေါင်းတို့အဘို့အနှုတ်ဆက်။ ပံ့ပိုးပေးသည် အရောင်မှတ်စု ၎င်းသည်အလွန်ရဲရင့်မှု၏မွေ့လျော်မှုကိုအမှန်ပင်ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်။ ကြိုးမဲ့အတွေ့အကြုံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးပါသေးသလော။ သင်သည်နောက်တဖန်မလွတ်ရ။
1 Urban 1၊ မင်းရဲ့ကြိုးတွေမပါတဲ့၊
3 ထူးခြားတဲ့နှင့် unapologetic ဒီဇိုင်း
4 စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ ၁ ၏တာဝန်ခံ
6 နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များစွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ 1
7 ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများနှင့်စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ၏ 1
Urban 1၊ မင်းရဲ့ကြိုးတွေမပါတဲ့၊
ဂီတသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အလွန်အရေးကြီးသည်။ နှင့်အတူပျော်မွေ့ ကြိုးမဲ့နားကြပ်များမှရရှိသောသက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုမည်သူမဆိုရရှိနိုင်သည်။ စွမ်းအင်စနစ်နှင့်မြို့ပြ ၁ သည်မယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ရွေးစရာကိုပေးသည်။ ထူးခြားသောအပြည့်အ ၀ အရောင်ဒီဇိုင်းနှင့်အသံအရည်အသွေးနိုင်ငံခြား "လှုံ့ဆော်မှု" မပါဘဲသူ့ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နှင့်အတူ။
သငျသညျအခြားဖြစ်ဟန်သောသူတို့အားနားကြပ်ငြီးငွေ့လျှင်။ သို့မဟုတ်တ ဦး တည်းနှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်အကြားသမ္မာသတိရှိကြလော့နှင့်တူညီဒီဇိုင်းများ။ The စွမ်းအင်စနစ်အားဖြင့်မြို့ပြ 1 သူတို့ကသို့လှည့် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ။ အသံအရည်အသွေးနှင့် တတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာယုံကြည်စိတ်ချကုန်ထုတ်လုပ်မှု စျေးကွက်အပေါ်အနည်းငယ်မော်ဒယ်များလိုပဲ။ အကယ်၍ သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက ဒီမှာစွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ ၁ ကိုရနိုင်သည် အမေဇုံကိုယူရို ၂၀ ထက်မနည်း
စွမ်းအင်စနစ်ကဆက်ပြီးကမ်းလှမ်းရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည် အများဆုံးထက်ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်။ မြို့ပြ 1 နားကြပ်အကွာအဝေးနှင့်အတူဆက်လက် အရောင်လောင်းခြင်း။ တစ် ဦး နှင့်အတူတစ် ဦး စုဆောင်းမှု၌တည်၏ ုံလိုက်ဖက်တဲ့နှစ်ရောင်စုံဒီဇိုင်း TWS ကိုကူးပြောင်းဖို့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာပြီးနောက်ဆုံးမှာကေဘယ်လ်တွေကိုမေ့သွားတယ်။ စျေးကွက်တွင်ကြိုးမဲ့နားကြပ်များ ၀ င်ရောက်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ရွေးချယ်စရာများရှိပါသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
unboxing လုပ်သည့်အချိန်တွင်ဤ Energy Sistem မြို့၏ဘူးခွံတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရမည့်အရာများကိုစာရင်းပြုစုထားပါသည်။ ၁။ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောအရာ၊ ငါတို့ရှာတယ် နားကြပ် သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္andာန်နဲ့အရောင်တွေကိုသူတို့အစကတည်းကသဘောကျခဲ့တယ် သူတို့အလေးချိန်မည်မျှသေးသည်ကိုသပိတ်မှောက်သည်။ la စွဲချက်အမှု တူညီသောအဝါရောင်လိုင်းစောင့်ရှောက်။
နားကြပ်များနှင့်အဖုံး / အိတ်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသည် အားသွင်းသည့်ကေဘယ်ကြိုးသည် Micro USB format ဖြင့်ရောက်ရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အတူ pads နှစ်ခုအပိုအစုံ အရာ၏သူဝတ်ဆင်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါရှိသည်သောသေးငယ်တဲ့ box ကို ကုမ္ပဏီနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းအင်စနစ်ထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်။ အကျဉ်းချုပ် အသုံးပြုမှုလမ်းညွှန်။ အာမခံစာရွက်စာတမ်းများစသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ပြောသကဲ့သို့အံ့အားသင့်စရာမရှိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သမျှအရာအားလုံးနှင့်အတူ။
ထူးခြားတဲ့နှင့် unapologetic ဒီဇိုင်း
ငါတို့ဘယ်လောက်ထပ်ခါထပ်ခါမြင်နေရတာကိုမငြိုငြင်ကြဘူး။ အသေးငယ်ဆုံးကုမ္ပဏီကြီးများအကြီးဆုံးတူအောင်ကြိုးစား။ စျေးကွက်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များကိုမီလီမီတာနီးပါးရှိသောမော်ဒယ်များကိုကူးယူရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်တူညီသောထုတ်ကုန်ကိုပေးသော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒီအတွေးအခေါ်နဲ့နေရာတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ထုတ်လုပ်သူတော်တော်များများရှိတယ်။ မင်းကငြီးငွေ့နေတာလား။
Energy Sistem သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းများကိုတီထွင်ခြင်းအားဖြင့်များစွာထပ်မံသွားသည်။ ပြီးတော့ထပ်တူထပ်မျှမူရင်းတံဆိပ်တံဆိပ်ဖြင့်မွေးလာသည့်အကြိမ်ရေများပြားလာသောထုတ်ကုန်များပိုမိုထုတ်လွှင့်ခြင်း။ အလွန်ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာမြို့ပြ ၁ ကြိုးမဲ့နားကြပ်ဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရနိုင်သောအရည်အသွေးရှိသောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည်.
နားကြပ်ကိုကိုယ်ကာယကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုတာကြည့်ပါ intraural format နဲ့ဒီဇိုင်း။ နားကြပ်သည်နားအတွင်း၌လုံးဝဖြစ်ပြီးလုံးလုံးလျားလျားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအသံသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြင့်ရောက်ရှိစေသည်။ ဒီအတွက်ငါတို့သေတ္တာထဲမှာတွေ့ရတဲ့အရွယ်အစားသုံးမျိုးကိုသုံးနိုင်သည်။
နားကြပ် တောက်ပသောပလပ်စတစ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည်အဝါရောင်၌ဤအမှု၌။ ထိတွေ့ခလုတ်နှင့်ရာဘာ၏အနက်ရောင်အရောင်နှင့်အတူသူတို့ဖန်တီးပါ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုနှစ်ခုအရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အခြားအရောင်များနှင့်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ အနက်ရောင်အဖြူနှင့်အတူပေါင်းစပ်, အဖြူရောင်ပန်းရောင်နှင့်အပြာနှင့်အတူပေါင်းစပ်အဖြူနှင့်အတူပေါင်းစပ်။ အားလုံးမူရင်းနှင့်အလွန်ရောင်စုံ။ သူတို့ဟာယူရို ၂၀ ထက်မကသင့်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ယခုစွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ 1 ကိုဝယ်ကြလော့ အခမဲ့ရေကြောင်းနှင့်အတူအမေဇုံပေါ်မှာ။
ထွက်ရင်ဆိုင်ရသောဟန်းဆက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ် ဂီတပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ခေါ်ဆိုမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခလုတ်။ သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီရှိသည် 40 mAh ဘက်ထရီ။ သူတို့ရှိသည် လေးဂရမ်အလေးချိန်ပေါ့သင်သည်သူတို့ကိုနှောင့်ယှက်စရာမလိုဘဲနာရီပေါင်းများစွာဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ ၁ ၏တာဝန်ခံ
မြို့ပြ ၁ ဗန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအမှုနှင့်အားသွင်းဘူတာ နားကြပ်လိုင်းပေါ်မှာ။ သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် သပိတ်မှောက်နားကြပ်၏တူညီသောသေံနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့် ကြည်လင်သော။ ထို့ကြောင့် ဘယ်အချိန်မှာသူတို့အားသွင်းနေတယ်၊ အနီရောင်မှအစိမ်းရောင်သို့ပြောင်းလဲသည့်နားကြပ်ပေါ်ရှိ LED မီးငယ်၏အရောင်ပေါ် မူတည်၍ ။
ခါတိုင်းလို, နားကြပ် သူတို့ကိုပုံမှန်စောင့်ရှောက်သောသံလိုက်အခြေစိုက်စခန်းပေါ်တွင်ငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ ထိပ်မှာငါတို့ရှာပါ တွဲဖက်မှု၏ယခုအချိန်တွင်အဘို့အစေခံလိမ့်မည်ဟုတစ် ဦး ခလုတ်ကို။ တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ကျေးဇူးတင်စကား နည်းပညာ "ပွင့်လင်း & ကစားသည်, သငျသညျသူတို့သာလုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်အောင်အမှုကနေသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်.
နောက်ဘက်မှာ အားသွင်း connector ကို, ပုံစံနှင့်အတူဤကိစ္စတွင်၌တည်၏ မိုက်ခရို USB။ devices များထံမှဆက်လက်ပျောက်ကွယ်သွားသော connector တစ်ခု။ USB Type C. သို့ပြောင်းလဲရန်တွန့်ဆုတ်နေသောထုတ်လုပ်သူများမှာဤသည်မှာအပြုသဘောဆောင်သောအစိတ်အပိုင်းရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌ရှိသည့်များစွာသောအခြား charger ကိုသုံးနိုင်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးသောကဏ္ aspects တစ်ခုအားထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဤမြို့ပြ 1 ကမ်းလှမ်းချက်ကို၏တာဝန်ခံအမှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားကြပ်များအတွက်အပိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် 15 နာရီအထိ။ သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် 300 mAh ဘက်ထရီ အဲဒါလုပ်နိုင်တယ် နားကြပ်ကို ၃ ကြိမ်အထိအပြည့်အဝအားသွင်းပါ။ ထိုအခါတစ် ဦး လက်၌ကိုက်ညီသောအရွယ်အစားနှင့်အတူ သာ 40 ဂရမ်အလေးချိန် ၎င်းကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမပြုဘဲမည်သည့်အိတ်ထဲတွင်မဆိုသယ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
TWS နားကြပ်ကိုယခုဝယ်ပါ စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ 1 အမေဇုံအပေါ်€ 20 ထက်လျော့နည်းသည်
ထုတ်ကုန်တစ်ခုသည်စီးပွားရေးအရအများဆုံးသုံးစွဲနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောအချက်သည်အမြင့်ဆုံးကိုကမ်းလှမ်းရန်အကြောင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြေလှမ်းကိုလှမ်းပြီးကြိုးမဲ့နားကြပ်ကိုစွန့်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ၎င်းသည်အတွေ့အကြုံအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်။ အဆိုပါစွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ 1 ကမ်းလှမ်းမှုဌဘလူးတုသ် ၅.၀ နည်းပညာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့လည်းရှိတယ် "ဖွင့်ပြီးကစားပါ"မြို့ပြနံပါတ်များကို ၀ တ်ဆင်။ အဖုံးကိုဖွင့်ရန်နှင့်သင့်နားတွင်ထားရန်လွယ်ကူစေသည်။ နားကြပ်တစ်ခုစီ၏ဘက်ထရီကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ 1AAh ရှိလိမ့်မည် စဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်ဖွင့်5နာရီအထိ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို ၃ နဲ့မြှောက်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အဖုံးမှကမ်းလှမ်းသောအပိုစွဲချက်များရှိပါကနာရီ ၂၀ အထိ တင်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ 1
ပုံစံ မြို့ပြ 1
စွမ်းအား5MW
နယ်ပယ် 20 မီတာအထိ
နားကြပ်ဘက်ထရီ 40 mAh ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီအားသွင်းအမှု 300 mAh ဘက်ထရီ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး5နာရီတိုငျအောငျ
အပြည့်အဝတာဝန်ခံအချိန် 1 အချိန်
နားကြပ်အရွယ်အစား 2.4 x ကို 2.3 x ကို 2.6
စွဲချက်အမှုအတိုင်းအတာ 7.3 x ကို4x ကို 2.9
အလေးချိန်အားသွင်းအမှု 28 ဂရမ်
စြေး 19.99 €
ဝယ်ယူ link ကို စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ 1
ပိုက်ဆံအတွက်တန်ဖိုး အရမ်းကောင်းတယ်၊ သူတို့ကကြိုးတွေကိုတစ်ပြိုင်နက်စွန့်လွှတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးမဲ့နားကြပ်တွေဖြစ်တယ်။
ပုံစံ အလွန်ထင်ရှားသောနုပျိုသောအသွင်အပြင်ကိုပူဇော်သောအရောင်များပေါင်းစပ်ထားသောခေတ်မီ။ ဂရုမစိုက်မှုကင်းသော
နှင့်အတူအလိုအလျောက်ဆက်သွယ်မှု ဖွင့်ပြီးဖွင့်ပါ နှင့်တည်ငြိမ် ဘလူးတုသ် ၅.၀.
မျက်စိဖြင့်စွဲမှတ်ထားသောဒီဇိုင်းသည် ပို၍ ပညာသတိရှိသောကိရိယာများကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။
connector အမျိုးအစားသည် မိုက်ခရို USB၎င်းတို့သည် USB Type C အသစ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်တွန့်ဆုတ်နေဆဲဖြစ်သည်။
အ ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများ ထိတ်လန့်သောအခါတောက်ပပျက်စီးလွယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » စွမ်းအင်စနစ်မြို့ပြ 1 နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်
OneDrive မှနောက်ဆုံး beta တွင်အမှောင်စနစ်ကိုပြသခဲ့သည်